Beijing Wistron Technology Ltd. Traffic Equipment Co, LTD. gadzira solar nzira yemigwagwa uye rezuva LED katsi maziso anovhenekera Southeast Asia. Solar road studs indasitiri yeWistron inobatsira kudzikisa huwandu hwetsaona dzemumugwagwa uye kufa kune imwe nzira yekufa. Beijing Wistron Technology ...
Maitiro ekuisa solar mugwagwa studs
Iko mashandiro uye nzvimbo dzekushandisa dzenzira dzemumigwagwa yezuva dzakasiyana. Kuiswa kwenzira dzemumigwagwa yezuva kunoda matanho anotevera ekugadzirira. Kutanga, gadzirira maturusi ekuisa ezuva emigwagwa. Maturusi anodiwa kuisa mashopu emumigwagwa yezuva ndeaya: kuyera vhiri uye mucherechedzo, core drill, core drill, ...
Nongedzo Mazano paSolar Cat Ziso Remugwagwa Studs Kubhadharisa
Yakazara inoshanda husiku nguva yekuita kwezuva katsi ziso mugwagwa stud (200+ maawa asiri-yekumira chiratidzo - pasina kuenderera mberi kune masikati) haizozadzikiswe kudzamara yabhadharwa zvachose panze. Panguva ino nekuratidzwa kwekunze kwekunze, iro hombe rekuchengetedza rinogonesa iyo ...
ndeupi mutsauko uripakati pepurasitiki kana aluminium yemigwagwa yematehwe?
ne admin pane 20-06-17
• Aluminium migwagwa yemigwagwa inogara yakasimba uye ine hupenyu hwakareba kupfuura mapurasitiki emigwagwa. • Mutengo wealuminium mbishi wakakwira kupfuura wepurasitiki maererano nemari yekutenga. Naizvozvo, aruminiyamu yemigwagwa yemitengo yemitengo iri 40% inodhura pane epurasitiki mugwagwa stud akaenzana saizi. • Plastiki ...